I-iPhone 7 kunye ne "shabby-solution" yeadaptha jack kumbane | Ndisuka mac
I-iPhone 7 kunye ne "crappy-solution" yeadaptha jack kumbane
Ifakiwe | | Izaziso
Phantse ngokuqinisekileyo, singaphantsi kweenyanga ezimbini ngaphambi kokuba iApple ivelise isizukulwana esitsha seflegi yayo, i-iPhone 7. Maninzi amarhe ajikelezayo kwaye, eshiya konke ecaleni, kukho enye eme ngamandla ukusukela ekuqaleni kwale unyaka: ukususwa okunokwenzeka kweplagi yentloko ye-jack ye-3.5 mm.
I-Apple idume ngokuthatha amanyathelo okuba nguvulindlela, igxekwe ize yamkelwe ngokubanzi (ndlelantle kwidiski ebonakalayo neMacBook Air, sisinxibelelanisi se-USB-C kuphela kwi-MacBook…). Ke ngoko, isenzo esinje asinakusothusa kakhulu, nangona kunjalo, loluphi ukhetho olucebisayo?
Iifowuni ze-iPhone 7
Ukuba ekugqibeleni uApple uthatha isigqibo sokuphelisa isinxibelelanisi sejackphone kwi-iPhone (into enokwenza ukuba isixhobo sinciphe kancinci), ingcinga yendlela yangoku, kunye nothando luka-Apple lokuphelisa iintambo, zisikhokelela kwesona sisombululo sinqwenelekayo: Faka i-headset ye-bluetooth kunye ne-iPhone 7 entsha.
I-Apple inamandla kunye nomda owaneleyo wokwenza oku, nokuba kungabandakanya iiBeats ezinonxibelelwano lweBluetooth, okanye ngeefowuni ezintsha ezinokuba yinto efanayo olu luvo lomoya. Kodwa ukongeza ekubeni namandla, I-Apple kufuneka ibe nenjongo kwaye iya kwenza njalo.
Masithembeke, Nasiphi na esinye isisombululo esingafakwanga iseti yentloko ye-bluetooth kunye ne-iPhone 7 ayonwabanga. Nangona kunjalo, abanye abahlalutyi bakholelwa ukuba inkampani iya kubheja kolu xabiso lungabizi.
Ukuba iApple ithathe isigqibo sokususa isinxibelelanisi sefowuni yentloko kwi-iPhone, isisombululo sakho kunokuba njalo sinike iadaptha yombane ukuze singabizi i-iPhone 7 ngelixa simamele umculo. Isengqiqweni kakhulu? 😅
Ukuba songeza kwesi sigqibo kulondolozo loyilo olufana nolo besele silubonile kwiminyaka embalwa, kunye nedatha evela kuvavanyo oluthile olubonisa ukuba ngabasebenzisi abali-9 kuphela kwabali-10 abaza kuhlaziya isiphelo sabo kule meko, ukukhubeka kwe-iPhone 7 kunokuba yinto enkulu.
Kufanelekile ukuba utshintsho olukhulu lugcinelwe u-2017, xa isikhumbuzo seminyaka elishumi ye-iPhone sibhiyozelwa, kodwa yonke into inomda, awucingi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-iPhone 7 kunye ne "crappy-solution" yeadaptha jack kumbane
Iindlela ezahlukeneyo zokujikeleza ngokulula ividiyo kwi-Mac
I-iPhone 7 iya kujongana neApple ngesicwangciso esiyingozi